WIC သင်တန်းသားများကိုများအတွက်မိုဘိုင်း app ။
သင်တန်းသားများကိုသူတို့ WIC အတွက်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့် tools များပေးပါ။
ကျနော်တို့လုံးဝသင့်ရဲ့အေဂျင်စီစိတ်ကြိုက်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်သင့်စားနပ်ရိက္ခာများစာရင်းနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေါင်းစပ် မသက်ဆိုင်သည်သင်၏ eWIC အခြေအနေ။ WICShopper သည်ရွေးခြယ်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏ပါဝင်သူများသည်သင်၏ WIC ပရိုဂရမ်တွင်အချိန်အများစုမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိစေရန်ကူညီသည့်စိတ်ကြိုက် palette တစ်ခုဖြစ်သည်။
moms ကူညီရန်အရသာကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ ပြင်ဆင်ထား သူတို့ရဲ့ WIC အစားအစာများ။
သင်တန်းသားများကိုသင်၏အလဲ tutorial စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံး WIC ရုံးသို့မဟုတ်သင့် helpdesk ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏စားနပ်ရိက္ခာစာရင်းကို ယူ. app ကိုအတွင်းလှလှပပဖော်ပြရန်ကြောင့်ဒီဇိုင်း။
WICShopper သည်ပြည်နယ် ၃၈ ခုနှင့် WIC အေဂျင်စီများကိုထောက်ပံ့သည်
သင်၏ WIC EBT ကဒ်၏နံပါတ် ၁၆ လုံးပါသောနံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ပါ။
သင်သည်သင်၏, သင့်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ ယခု နှင့် အနာဂတ် WIC အကျိုးခံစားခွင့်များသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့အလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည် WIC သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကို ၀ ယ်ယူရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးမရှိပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏သင်တန်းသားများကိုသူတို့အားအနီးဆုံးကနေ app ကို ပတ်သက်. စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။
~ ဘရတ်ခရစ်စ, ဖလော်ရီဒါ
ငါသည်သင်တို့ကသင်တန်းသားများကိုတို့ကလက်ခံရရှိခဲ့ရဲ့ပုံကိုကောင်းစွာ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မေတ္တာရပ်ခံအပြောင်းအလဲများအောင်နှင့်ရှိကြ၏လက်ခံပေးနိုင်ရန်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ် app ကိုဖွင့်မရခဲ့ပုံကိုလွယ်ကူသောအဘို့အ မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်ချင်ပါတယ်။
~ ဂျူဒီ Hause, မက်ဆာချူးဆက် WIC
ဒီ app ကိုချစ် !! အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ! ယခုငါငါ့သမီးများအတွက်ရရှိရန်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏။ အစားလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများချွေ၏။ စက္ကူလွတ် !! ဤနည်း သာ. ကောင်း၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
~ WIC ပါဝင်သူ
app ကို Love! အရာအားလုံး sooo အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါဒီ app ကိုချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာသင်ထွက်ခွာသွားကြပါပြီအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုရှာဖွေနှိုင်းယှဉ်ဤနေရာတွင်ပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစစျဆေးဖို့သိပ်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်!
ဂရိတ် app ကို! ငါဒီ app ကိုငါကျန်ကြွင်းစေပြီအဘယျသို့အကြိုးခံစားခှငျ့မှတ်မိဖို့ကဒါရိုးရှင်းစေသည်ကိုချစ်!
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသားများကိုတကယ်သာထိရောက်သော WIC app ကိုမရရှိနိုင်ပါ - ဤရလဒ်များကို WICShopper ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်အတည်ပြုပေးရန်ဆက်လက်။
ငါ WIC ဒီ app ရှိပြီးအခမဲ့ကြောင်းကိုဒါဝမ်းသာတယ်! ငါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲပေါ်မှာ၏လုပ်ရတဲ့ဘဲငါဖုန်းရဲ့နှစ်သိမ့်မှာငါ့အချိန်ခွင်လျှာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအောင်ဘို့သင့်ကို WIC ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စာရွက်အပိုင်းကိုချစ်။ အမြဲတမ်းနောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ငါ၏အကလေးနှင့်ဗြဲများအတွက်ကျန်းမာသောစေရန်အသစ်သောအရာရှာနေ !!
တစ်ဦးမွေးကင်းစထားရှိခြင်းသည်စွမ်းအင် alot ကြာ! ဒါပေမယ့်ဒီ app ငါ့ကိုတန်ချိန်ကူညီပေးသည် !! Couldnt ငါ၏အ WIC စျေးဝယ်အတူကူညီပေးဖို့ပိုကောင်းတဲ့ app တစ်ခုတောင်း
ဒေါက်တာ Yum စီမံကိန်း
သင်၏အေဂျင်စီကို WICShopper တွင်ရယူလိုပါသလား။ ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ အဲဒါရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်လား။
JPMA, Inc. | မှ ဖန်တီးထားသည်။ မူပိုင်ခွင့် 2012 - 2021 | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။